Best Passports to have: Japan, Singapore, South Korea, Germany | International Visitor News
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iipasipoti ezilungileyo kakhulu: iJapan, iSingapore, iSouth Korea, iJamani
Iipasipoti ezilungileyo kakhulu: iJapan, iSingapore, iSouth Korea, iJamani
Ipasipoti yase-US okanye yase-UK inika ukufikelela kumazwe angama-75 asimahla. Oku kuzisa ixabiso lepasipoti yase-US kwinqanaba elifanayo neGambia.
Ingxelo yokuHamba kweHlabathi ka-2021 Q1 ibalaselisa uphando olutsha ngeQela loLwazi oluNzulu, ukugquma idatha evela kwiCovid-19 yoVavanyo loMngcipheko kunye noVavanyo loKhuseleko loqoqosho, ezentlalo, kunye nokuzinza kwezempilo kumazwe angama-250 kunye nemimandla eneziphumo zeHenley Passport Index zamva nje.
Njengoko i-2021 iqala, iziphumo zamva nje ezivela kwi-Index yePasipoti yaseHenley- inqanaba lokuqala kuzo zonke iipasipoti zehlabathi ngokwenani leendawo abanokuthi bafikelele kuzo abanini ngaphandle kwe-visa yangaphambili-zibonelela ngemibono enomdla ngekamva lenkululeko yokuhamba kwihlabathi elinayo yaguqulwa ziziphumo zobhubhane weCovid-19.
Ngaphandle kokuthathela ingqalelo izithintelo zethutyana, iJapan iyaqhubeka nokubamba indawo kwindawo yokuqala kwisalathiso, nabaphethe ipasipoti abakwaziyo ukufikelela kwiindawo ezili-191 kwihlabathi liphela elingena-visa. Oku kuphawula unyaka wesithathu ngokulandelelana wokuba iJapan ibambe indawo ephezulu, nokuba iyodwa okanye ngokudibeneyo neSingapore. Indawo yaseAsia Pacific (APAC) yolawulo lwamazwe kwisalathiso- esekwe kwidatha ekhethekileyo evela kwi- Umbutho wezoThutho zoMoya oManye amazwe (IATA) -ngoku kubonakala kufanelekile. ISingapore ihleli kwindawo yesi-2, ikwazi ukufikelela kwiindawo ezili-190, kwaye uMzantsi Korea ubambe indawo yesi-3 ecaleni kweJamani, bobabini benamanqaku e-visa-free / visa-on-ukufika ka-189. Kancinci kancinci ezantsi kodwa usahleli phezulu 10, Entsha I-Zealand ikwindawo yesi-7, ngokungena-visa ngaphandle kwe-185, ngelixa i-Australia ikwindawo ye-8th, kunye nokufikelela kwiindawo ezili-184.
Ukunyuka kwamazwe e-APAC kwinqanaba le-Henley Passport Index yinto entsha. Ngaphezulu kwembali yeminyaka eli-16 yesalathiso, amabala aphezulu ngokwesiko abanjwa ngamazwe e-EU, i-UK, okanye i-US, kwaye iingcali zibonisa ukuba indawo yamandla e-APAC iya kuqhubeka njengoko kubandakanya amanye amazwe okuqala ukuqala kwenkqubo kuchacha kwindyikitya yokufa.
Nge-US ne-UK zisajongana nemiceli mngeni ebalulekileyo enxulumene nentsholongwane, kunye namandla epasipoti omabini la mazwe aqhubekekayo ukonakala ngokuthe ngcembe, ukulingana kwamandla kuyatshintsha. Kule minyaka isixhenxe idlulileyo, ipaspoti yase-US yehle ukusuka kwindawo yokuqala ukuya kwi-7th indawo, indawo ekwabelana ngayo ngoku ne-UK. Ngenxa yokunqongophala okunxulumene nobhubhane, abahambi abavela e-UK nase-US okwangoku bajongana nezithintelo ezinkulu ezivela kumazwe angaphezu kwe-105, nabaphethe ipasipoti yase-US abakwaziyo ukuya kwiindawo ezingaphantsi kwama-75, ngelixa abanini bepasipoti base-UK okwangoku benokufikelela ngaphantsi kwama-70.
UGqr.Christian H. Kaelin, Usihlalo wefemi yokuhlala yokuhlala ecebisayo IHenley kunye namaQabane kwaye umqambi weengcinga zesalathiso sepaspoti, uthi inqanaba lakutshanje linika ithuba lokucingisisa ngesiphithiphithi esingaqhelekanga esaphawula u-2020. “Kunyaka nje omnye odlulileyo zonke izikhombisi zazibonisa ukuba amazinga okuhamba kwehlabathi azakuqhubeka ukunyuka, inkululeko yokuhamba ukwanda, kwaye abo banepasipoti ezinamandla banokuonwabela ukufikelela ngakumbi kunangaphambili. Ukutshixeka kwehlabathi kuyichasile le ngqikelelo, kwaye njengoko izithintelo ziqala ukuphakama, iziphumo ezivela kwisalathiso samva nje zisikhumbuza ukuba lithetha ntoni kanye kanye igunya lamapasi kwihlabathi elikhuselwe ngulo bhubhane. ”
Ngogonyo lokuqala lweCovid-19 oluvunyiweyo ngaphezulu nje kwinyanga ephelileyo, iingcali zeshishini leenqwelo moya zikholelwa ukuba ugonyo olunyanzelekileyo ngaphambi kohambo lomoya kungafuneka kube yimfuneko kungekudala. Ubugcisa obutsha obucwangciselwe ukumiliselwa kwi-Q1 2021 obuya kuba negalelo ekubuyiseleni ukuhamba kwehlabathi Inyathelo le-IATA lokuPasa -Isicelo esiphathwayo esenza ukuba abahambi bagcine kwaye baphathe izatifikethi zabo eziqinisekisiweyo zovavanyo lwe-Covid-19 okanye izitofu.
Ukuseta kwakhona okuhle kunika indlela yokufuduka okukhulu okulandelayo
Iingcali zicebisa ukuba malunga nokuhamba kwexesha elizayo kwihlabathi, asinakulindela ukubuyela kwiipateni zaphambi kobhubhane. UGqirha Parag Khanna,othengisa kakhulu (Ikamva Ngaba yiAsia) kunye noMsunguli kunye noMlingane oLawulayo we-FutureMap eSingapore uthi le nkqubo ayizukuphinda ibuyele kule nto ibiyiyo, kwaye ubuzwe bodwa abusayi kwanela ukuqinisekisa indlela ekhuselekileyo. "Kwanakwiipassport ezinamandla ezinje ngeJapan, iSingapore, uMzantsi Korea, kunye namalungu e-EU, imigaqo-nkqubo eyongezelelekileyo iyakufuneka ukuba iphinde ifumane ukungahambelani." Ejonge phambili, u-Khanna ucebisa ukuba utshintsho olwenzeka kubemi lunokuzisa utshintsho olukhulu: “Ulutsha lwanamhlanje luyazi ngokwentlalo, luyazi ngendalo, kwaye alunabuzwe — konke oku kubenza babe ngabona bantu bahamba phambili kwimbali yoluntu. Babhengeza ukutshintsha kwemizimba ukusuka kwilizwe ngalinye kuye ekubeni ngumntu ngamnye kubo. ”
Uphuhliso oluphambili njengolu kuxoxwa ngalo Ingxelo yokuHamba kweHlabathi ka-2021 Q1 ikhutshwe ngu IHenley kunye namaQabane namhlanje. Ingxelo, enika uhlalutyo olusemagqabini kunye neenkcazo ezivela kwizifundiswa eziphambili kunye neengcali zeengcali, ibonisa ukuba ngelixa ubhubhane lunokuthi luthintele okwethutyana intshukumo yamazwe, umnqweno wokuhamba kunye nokufuduka uhlala, nabantu bejika kwizisombululo zokuyila ukukhusela amalungelo abo ehlabathi Ixesha lasemva koCovid.
Ukunika ingxelo ngenkqubo ekhulayo yokufumana ubumi besibini, UNjingalwazi Peter J. SpiroUCharles Weiner uNjingalwazi woMthetho e-University University Law School, uthi lo bhubhane "ubonakalise eyona nto ibalulekileyo kwinkqubo yokuhamba" ukuqinisekisa ngezehlo ezothusayo zexesha elizayo ”.
The Ingxelo yokuHamba kweHlabathi ka-2021 Q1 ikwaqaqambisa uphando olutsha ngo IQela loLwazi oluNzuluUkuwaleka idatha ukusuka kwifayile ye- Uvavanyo lomngcipheko kunye noKhuseleko lweCovid-19 yezoqoqosho, ezentlalo, kunye nokuzinza kwezempilo kwamazwe angama-250 kunye nemimandla enezakutshanje Indibano yokundwendwela yeHenley iziphumo. Okuvelayo kukuba kumazwe aphuhlileyo nasaphuhlayo ngokufanayo, inkululeko yokuhamba okwangoku ayisosiphumo sokungabikho kwenkululeko kwezentlalo okanye uphuhliso olungeluhle loqoqosho kodwa kukusilela kolawulo lomngcipheko, ukulungela impilo, kunye nokubeka iliso kunye nokufumanisa. Ngamanye amagama, ukungahambi kakuhle kwihlabathi jikelele akusengoyena mntu unengxaki yabemi bamazwe ahambele phambili.
Ukuxoxa ngefuthe lobhubhane ekufudukeni kwetalente, UGreg Lindsay, UMlawuli woPhando oluSetyenzisiweyo eNewCities, yalatha ekunyukeni kwezinto ezibizwa ngokuba 'zii-digital nomads'. "I-moniker ngoku ichaza ngokuchanekileyo nabani na onegunya elenziwe nguCovid ukuba asebenze naphina - kwaye amawaka, ukuba ayizigidi, alandela ubundlobongela be-arbitrage ekukhetheni kwabo iindawo. Ubungqina bucacile, kubandakanya amanani abantu baseMelika abafuna ukuba ngabemi base-2020, kwaye amaBritane angxamele ukufumana ukufikelela kwi-EU ngaphambi kweBrexit. ”